I-Google Play ngeke isamukela i-APK kusuka ngo-Agasti futhi manje isencike kuzinhlelo zokusebenza ngefomethi ye-AAB | Kusuka kuLinux
Ngesikhathi se-Google I / O abathuthukisi be-Google abaphethe ukuthuthukiswa kwe-Android Bememezele ukuthi kusukela ngo-Agasti walo nyaka ukufuduka kwezicelo kuzokwenziwa kuGoogle Play ukusebenzisa ifomethi yokusabalalisa yenqwaba yohlelo lokusebenza lwe-Android esikhundleni se-APK.
Ngalokhu, kusukela ngo-Agasti 2021, ifomethi Inqwaba yohlelo lokusebenza kufanele isetshenziswe kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezintsha ezingezwe ku-Google Play, kanye nokulethwa kwezicelo ezisebenza ngaphandle kokufakwa (i-ZIP application esheshayo).
Khumbula lokho selokhu i-Android ibikhona, izinhlelo zokusebenza ze-Android zikhishwe ngefomethi ye-APK Okuqukethe yonke ikhodi nezinsizakusebenza zohlelo lokusebenza, kanye nezinye izici zokuphepha, ezinjenge-manifest yesiginesha. Lapho i-APK ifakiwe, imane ikopishelwa kufolda ethile futhi ingezwe ku-database yangaphakathi yezinhlelo zokusebenza ezifakiwe.
Ngesikhathi sokufakwa, isiginesha yesicelo iphinde ihlolwe ukuqinisekisa ukuthi isebenza ngokusemthethweni. Uma uhlelo lokusebenza seluvele lufakiwe, i-Android iqhathanisa isiginesha yohlelo lokusebenza olusha naleyo yohlelo olufakiwe. Uma isiginesha ingavumelekile noma ingafani, i-Android iyenqaba ukufaka uhlelo. Lokhu kuqinisekiswa kwesiginesha kuyingxenye ebalulekile yezokuphepha kwe-Android.
Kodwa-ke, ngo-2018 i-Google yethule ifomethi entsha ebizwa nge-Android App Bundles noma i-AAB. I-Google ikhombe ukuthi le fomethi entsha izovumela amafayili wohlelo lokusebenza amancane nezindlela ezilula zokulawula izici ezahlukahlukene zezinhlelo zokusebenza. Phakathi kwezigidi zezinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo, izinkulungwane sezivele zisebenzisa uhlelo lwe-AAB.
Ukuvuselelwa kwezinhlelo zokusebenza osevele zikhona kukhathalogi kungaqhubeka nokusatshalaliswa ngefomethi ye-APK. Ukunikezela ngezinsizakusebenza kumageyimu, isevisi ye-Play Asset Delivery kufanele isetshenziswe esikhundleni se-OBB. Ukuze uqinisekise izinhlelo zokusebenza zenqwaba yohlelo lokusebenza ngesiginesha yedijithali, insiza ye-Play App Signing kumele isetshenziswe, okusho ukubeka okhiye kwingqalasizinda ye-Google yokwenziwa kwamasiginesha edijithali.
Inqwaba yohlelo lokusebenza iyahambelana kusuka ku-Android 9 futhi ikuvumela ukuthi wakhe iphakheji efaka yonke into uhlelo lokusebenza edinga ukuyenza kunoma iyiphi idivayisi: amaphakethe olimi, ukusekelwa kosayizi abahlukahlukene besikrini, nemihlangano yamapulatifomu e-hardware ahlukile. Lapho ulanda uhlelo lokusebenza kusuka ku-Google Play, kuphela ikhodi nezinsizakusebenza ezidingekayo ukuze kusetshenziswe kudivayisi ethile ezilethwa ohlelweni lomsebenzisi. Konjiniyela wohlelo lokusebenza, ukushintshela kunqwaba yohlelo lokusebenza kuvamise kwehle ukunika amandla enye inketho yokwakha kuzilungiselelo nokuhlola inqwaba ye-AAB evelayo.
Uma kuqhathaniswa nokulanda ama-APK we-monolithic, ukusebenzisa inqwaba yohlelo lokusebenza kunciphisa inani ledatha elandwe kusistimu yomsebenzisi ngokwesilinganiso esingu-15%, okuholela ekongeni endaweni yokugcina kanye nokufakwa kohlelo lokusebenza okusheshayo. Ngokusho kwe-Google, cishe izinhlelo zokusebenza ezingaba yisigidi zishintshele kufomethi ye-App Bundle, kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza ezivela ku-Adobe, Duolingo, Gameloft, Netflix, redBus, Riafy, ne-Twitter.
Esinye sezici ezinhle kakhulu kusuka ku-Android App Bundle kanyes ukuthi uhlelo lungahlukaniswa lube izingxenye eziningana, Lokhu kugxile kakhulu kumageyimu, ngoba nge-Play Asset Delivery, ngokwesibonelo, abasebenzisi abaqala umdlalo bazothola kuphela amazinga okuqala futhi njengoba beqhubeka bangalanda amazinga alandelayo uma kudingeka. Futhi i-Google Play Isitolo izonquma ukuthi iziphi izinsiza ezifanelekela kakhulu idivayisi yakho, ngokwesibonelo ngaphandle kwesidingo sokwakheka kokucaca okuphezulu kudivayisi esezingeni eliphansi, nokuqhubeka kunciphise isidingo sokudluliswa kwedatha.
Imfuneko yokusebenzisa izinqwaba zohlelo lokusebenza lwe-Android isebenza kuphela kuzinhlelo zokusebenza ezintsha, ngokuya kwe-Google.
"Izicelo ezikhona njengamanje zikhululiwe, njengoba nezicelo ezizimele zishicilelwa zabasebenzisi abaphethwe be-Google Play," kusho inkampani. Izinhlelo zokusebenza ezikhona zingaqhubeka nokunikeza izibuyekezo njengama-APK, futhi ukushintshela ku-AAB ngeke kususe izitolo zohlelo lokusebenza ezincintisanayo. Uma ungunjiniyela uhlela ukukhipha uhlelo olusha, asisekho isikhathi esisele sokuqinisekisa ukuthi usebenzisa ifomethi entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google Play ngeke isamukela ama-APK kusuka ngo-Agasti futhi manje isencike kuzinhlelo zokusebenza ngefomethi ye-AAB